Miss Hong Kong Vakawana Chinhu Chinopfuura Mukurumbira. Nyaya Youpenyu
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Maltese Maya Myanmar Ndebele Ndonga Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Akawana Chimwe Chinhu Chinopfuura Mukurumbira
Yakataurwa naMina Hung Godenzi
Rimwe zuva ari manheru mugore ra1984, upenyu hwangu hwakachinja kubva pakuva musikanawo zvake kuenda pakuva munhu ane mukurumbira. Ndainge ndahwina mumakwikwi ekuva Miss Hong Kong. Mufananidzo wangu wakaiswa papeji yekutanga mumagazini nemapepanhau. Ndakanga ndava kuimba, kutamba mimhanzi, kutaura pamberi pevanhu uye kuita mapurogiramu epaTV, ndichitombobudawo ndiine vanhu vanozivikanwa chaizvo, vakadai sagavhuna wemuHong Kong. Ndaipfekawo hembe dzakanaka.
Gore rakatevera racho ndakatanga kuita zvemafirimu, uye kakati kuti ndini ndaibuda ndiri mutambi mukuru pakuekita. Vatori venhau vaida kunzwa nezveupenyu hwangu, vanotora mifananidzo vaigara vachinditsvaga, uye vanhu vaiwanzoda kuti ndiuye pazviitiko zvavo zvinokosha, pamitambo yekuvhura zvivako, uye kuti ndidye navo. Munhu wese aindifarira.
Ndichiekita firimu rekurwa
Zvishoma nezvishoma ndakaona kuti zvose izvi zvaisanakidza sezvandaifunga. Ndaiwanzoekita mafirimu echisimba, uye izvi zvaiva nengozi. Pakugadzira mafirimu muHong Kong vakanga vasingawanzoite sezvaiitwa kuHollywood zvekuti mumwe munhu anokuekitira kana pachiitwa zvinogona kukuvadza. Saka ndaitoita ndoga zvinhu zvakadai sekusvetutsa mudhudhudhu uchienda nepamusoro pemotokari. Mafirimu akawanda andaiekita ainge aine zvinhu zvakaipa uye zvechisimba. Mamwe acho aibuda zvinhu zvechidhimoni.
Muna 1995, ndakaroorwa nemurume aishanda pakubudiswa kwemafirimu. Ndaiita sekuti ndiri kuwana zvose zvinoita kuti ndifare zvakadai semukurumbira, upfumi, uye murume aindida, asi ndaigara ndichizvidya mwoyo uye ndakasuruvara. Ndakasarudza kusiya zvekuekita mafirimu.
KUTENDA KWANDAIVA NAKWO NDIRI MUDUKU
Ndakatanga kuyemura kutenda muna Mwari kwandaiva nakwo ndichiri kasikana. Kare ikako, Mugovera wega wega ini nasisi vangu taishanyira imwe mhuri yeZvapupu zvaJehovha. Baba vemhuri iyi, Joe McGrath, vaitidzidzisa Bhaibheri pamwe chete nevanasikana vavo vatatu. Mhuri iyi yaifara zvekuti, uye “Babamukuru Joe” vairemekedza mudzimai wavo nevana vavo. Ndainakidzwawo pandaienda navo kumisangano yekunamata. Dzimwe nguva taienda kumagungano makuru. Nguva iyi yaindinakidza. Ndainzwa ndisina chekutya pandaiva neZvapupu zvaJehovha.
Asi kumba, zvinhu zvainge zvisiri kufamba zvakanaka. Maitiro ababa vangu aishungurudza mhamha, uye vakaguma vava kuzvidya mwoyo chaizvo. Pandakanga ndava nemakore anenge 10, Amai vakarega kunamata neZvapupu zvaJehovha. Ndakaenderera mberi nekunamata neZvapupu, asi ndisingazviite nemwoyo wose, ndikazobhabhatidzwa ndava nemakore 17. Pasina nguva ndakanga ndava kuita zvinhu zvinopesana nezvinoitwa nevanamati ndikasiya ungano.
Ndichangobva kuchata, vatariri vaviri vemuungano yeZvapupu zvaJehovha yekwandaigara vakandishanyira. Vakatsanangura zvandaigona kuita kuti ndidzoke kuna Jehovha Mwari, uye vakaronga kuti mumishinari ainzi Cindy andibatsire. Panguva iyi, kutenda kwangu muna Mwari kwakanga kusisina kusimba, saka ndakamukumbira kuti andiratidze uchapupu hwekuti Bhaibheri iShoko raMwari zvechokwadi. Akandiratidza mienzaniso yeuprofita hwemuBhaibheri hwakazadziswa. Zvishoma nezvishoma takasvika pakuva shamwari dzepedyo, uye akakumbira kundidzidzisa dzidziso dzinokosha dzemuBhaibheri. Ndakabvuma. Apa ndipo pandakatanga kuona kuti Jehovha ndiMwari ane rudo, anoda kuti ndifare.
Pandakatangazve kunamata neZvapupu, ndakaona kuti ndainakidzwa pandaipinda misangano navo kutopfuura zvandaiita ndiine vanhu vandaishanda navo kune zvemafirimu. Asi zvinhu zvakaitika ndichiri muduku zvakaita kuti ndisavimbe nachero ani zvake muupenyu, uye ndaizviona ndisingabatsiri. Mumwe wemuungano akandibatsira paakandiratidza muBhaibheri kuti ndingaita sei kuti ndisashushikane saizvozvo, uye ndakadzidzawo kuva neshamwari dzechokwadi.
CHIMWE CHINHU CHIRI NANI KUPFUURA MUKURUMBIRA
Muna 1997, ini nemurume wangu takatamira kuHollywood, California, U.S.A. Ndava ikoko, ndakatanga kushanda nesimba pakubatsira vanhu kuti vazive nezveuchenjeri huri muShoko raMwari. Kudzidzisa vanhu Bhaibheri kuri kuita kuti ndigutsikane muupenyu kupfuura mukurumbira wese wandaiwana pandaiekita nekubuda semutambi mukuru mumafirimu. Somuenzaniso, muna 2002, ndakasangana naCheri, shamwari yandainge ndazivana nayo kwenguva refu kuHong Kong. Upenyu hwedu hwainge hwakafanana pane zvakawanda. Ainge amboitawo Miss Hong Kong muna 1983, ini ndikazoitawo muna 1984. Ndiye akatondipfekedza korona yekuhwina kwandakaita pamakwikwi aya. Naiyewo akatanga kuekita mafirimu uye gare gare akazova producer, achishanda nevanhu vainge vakakurumbira, uye ainge atamirawo kuHollywood.
Ndakanzwira Cheri tsitsi pandakaziva kuti murume aida kumuroora akaerekana afa nechirwere chemwoyo. Hapana kana akamunyaradza kuchitendero chake chechiBuddha. Kungofanana neni, ainge araramawo upenyu hunorwarirwa nevakawanda hwekuva nemukurumbira, asi ainge asingafari uye hapana waaivimba naye. Ndakatanga kumuudza zvandainge ndadzidza muBhaibheri, asi zvaimuomera kuzvinzwisisa nekuti aiva muchitendero chechiBhudha.
Shamwari yangu Cheri achiekita firimu
Rimwe zuva muna 2003, Cheri akandifonera ari kuVancouver, Canada, kwaakanga achishanda pakugadzirwa kwerimwe firimu. Akandiudza achifara kuti paakanga achityaira motokari yake kunzvimbo iri kure nemaguta, akangoerekana ava kunyengetera zvinonzwika achiti: “Itai kuti ndizive kuti Mwari wechokwadi ndiani? Munonzi ani?” Panguva iyoyo akabva atyaira achipfuura nepaImba yoUmambo ndokuona zita rekuti Jehovha. Akabva angofunga kuti iyi yaiva mhinduro yaibva kuna Mwari, uye Cheri akabva ada kuonana neZvapupu zvaJehovha nekukurumidza sezvaaigona. Ndakaronga kuti aonane navo, uye pasina nguva, akapinda musangano neungano yemutauro weChinese yekuVancouver.
Papera nguva yakati, Cheri akandiudza kuti: “Vanhu ava vanondifarira zvechokwadi. Ndinogona kuvaudza zviri mumwoyo mangu.” Paakandiudza izvozvo, ndakafara chaizvo nekuti paaiita zvemafirimu, Cheri haana kumbobvira aita shamwari. Cheri akaramba achipinda misangano. Asi muna 2005, akasaina pepa rekuti aekite mumafirimu maviri akareba kuChina, saka aifanira kudzokera kuHong Kong. Zvinofadza kuti muna 2006 Cheri akazotsaurira upenyu hwake kuna Jehovha uye akabhabhatidzwa pagungano reZvapupu kuHong Kong. Kunyange zvazvo aida kuwedzera pane zvaaiita pakushumira Jehovha, basa rake pakuita zvemafirimu raiita kuti zvimuomere, uye aisambofara.
MUFARO WEKUBATSIRA VAMWE
Muna 2009, upenyu hwaCheri hwakachinja. Akasarudza kusiya zvemafirimu kuti anyatsoshumira Jehovha. Akava neshamwari dzakawanda muungano yechiKristu. Akazova muparidzi wenguva yakazara wemashoko akanaka eUmambo uye akafara chaizvo kubatsira vanhu kuva neupenyu huri nani.—Mateu 24:14.
Cheri akazodzidza mutauro weNepalese kuti atsigire boka riri kukura reZvapupu rinotaura chiNepalese kuHong Kong. Zvinoita sokuti vanhu vakawanda vechiNepalese kuHong Kong vanotarisirwa pasi kana kushorwa nekuti havanyatsogona Chirungu kana chiChinese uye nekuti tsika dzavo dzakasiyana nedzevamwe. Cheri akandiudza nezvekunakidzwa kwaaiita nekubatsira vanhu ava kunzwisisa Bhaibheri. Semuenzaniso, rimwe zuva paaiparidza paimba neimba, akasangana nemumwe mukadzi anotaura chiNepalese, uye mukadzi iyeye aingoziva zvishoma nezvaJesu, asi hapana chaaimboziva nezvaMwari wechokwadi, Jehovha. Cheri akashandisa Bhaibheri kumuratidza kuti Jesu akanyengetera kuna Baba vake vari kudenga. Mukadzi wacho paakaona kuti aigona kunyengetera kuna Mwari wechokwadi, ane zita rekuti Jehovha, akanyatsoteerera uye akabvuma mashoko akanaka. Pasina nguva murume wake nemwanasikana wake vakanga vava kudzidzawo Bhaibheri.—Pisarema 83:18; Ruka 22:41, 42.
Cheri iye zvino
Pandakaona kuti Cheri ainakidzwa nekuita nguva yakawanda achiparidza, ndakazvibvunza kuti, ‘Chii chinonditadzisa kumutevedzerawo?’ Panguva iyi, iniwo ndakanga ndava kugara kuHong Kong zvekare. Ndakasarudza kuronga zvinhu zvangu muupenyu kuti ndinyatsowana nguva yekudzidzisa vanhu chokwadi cheBhaibheri. Ndakaona kuti ndinowana mufaro wechokwadi pandinoteerera vanhu pavanenge vachitaura, ndovabatsira kunzwisisa Shoko raMwari.
Ndakaona kuti ndinowana mufaro wechokwadi pandinoteerera vanhu pavanenge vachitaura, ndovabatsira kunzwisisa Shoko raMwari
Semuenzaniso, ndakadzidzisa mumwe mukadzi wekuVietnam Bhaibheri uyo aigara akasuwa uye misodzi iri pamatama. Iye zvino ava kufara muupenyu uye anonakidzwa nekupinda misangano yeZvapupu zvaJehovha.
Ini naCheri takawana chimwe chinhu chinopfuura mukurumbira. Kuita zvemafirimu kwainakidza uye kwaiita kuti tive nemukurumbira, asi kudzidzisa vanhu nezvaJehovha Mwari kunoita kuti tigutsikane kupfuura zvemafirimu nekuti kunoita kuti Jehovha akudzwe. Takanyatsoona kuti mashoko akataurwa naJesu ndeechokwadi paakati: “Kupa kune mufaro mukuru kupfuura kugamuchira.”—Mabasa 20:35.